ယိုဆည်မြောင်းစနစ်ပေးသွင်းနှင့်ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်စက်ရုံ - Jianda
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > Greenhosue စနစ်များ > ဆည်မြောင်းစနစ် > ယိုဆည်မြောင်းစနစ်
သောက်သုံးရေပေးစနစ်သည်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးဖန်လုံအိမ်ဆည်မြောင်းအတွက်အသုံးဝင်ဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။ အချိန်ကုန်သက်သာသည်။ ပြည်နယ်ဆည်မြောင်းစနစ်သည်လက်ရှိတွင်ကျယ်ပြန့်စွာ အသုံးပြု၍ တိုးမြှင့်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆည်မြောင်းစနစ်သည်အလွန်ဘက်စုံ။ ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားဖြစ်စီးပွားဖြစ်စိုက်ပျိုးရေးအတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်။ နှင့်ပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံခြားဖောက်သည်များကဝန်ဆောင်မှုများကိုတန်ဖိုးထားပါပြီ။
ယိုဆည်မြောင်းစနစ်သည်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးဖန်လုံအိမ်ဆည်မြောင်းအတွက်အသုံးဝင်ဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။ အချိန်ကုန်သက်သာပြီးပြည်နယ်ဆည်မြောင်းစနစ်ကိုလက်ရှိတွင်ကျယ်ပြန့်စွာ အသုံးပြု၍ တိုးမြှင့်ထားသည်။ကျွန်ုပ်တို့၏ဆည်မြောင်းစနစ်သည်အလွန်ဘက်စုံသုံးသည်။ သင်စီးပွားဖြစ်သို့မဟုတ်စိုက်ပျိုးရေးအတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်နှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံခြားဖောက်သည်များကတန်ဖိုးထားကြသည်။
ဖန်လုံအိမ်၏ Professional ကထုတ်လုပ်
အရောင်းအ ၀ ယ်ဝန်ဆောင်မှု
ယိုဆည်မြောင်းစနစ်သည်မြေသို့မဟုတ်မြေဆီလွှာကိုရေအတုလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်စိုက်ပျိုးရေးသီးနှံများကြီးထွားလာခြင်း၊ ရှုခင်းများပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်ခြောက်သွေ့သောဒေသများတွင်မိုးရွာသွန်းမှုကာလအတွင်းပျက်စီးသောမြေဆီလွှာများဖော်ထုတ်ရာတွင်အထောက်အကူပြုရန်အသုံးပြုသည်။ ဆည်မြောင်းစနစ်ကိုနှစ်မျိုးခွဲခြားနိုင်သည်။
ဖန်လုံအိမ်အာနိသင်ကိုရေသွင်းခြင်းသည်လက်ရှိအချိန်တွင်မိုးခေါင်မှုနှင့်ရေပြတ်လပ်မှုအတွက်ရေချွေတာသည့်အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ရေအသုံးပြုမှုနှုန်းသည် ၉၅% အထိရှိသည်။ သစ်သီးများ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ ငွေသားကောက်ပဲသီးနှံများနှင့်ဖန်လုံအိမ်ဆည်မြောင်းများတွင်လည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။ ၎င်းတွင်ရေချွေတာခြင်း၊ ဆည်မြောင်းတူညီမှု၊ စွမ်းအင်၊ မြေဆီလွှာနှင့်မြေအနေအထားအလိုက်အထိုက်နေတတ်မှု၊
ဖန်လုံအိမ်အာနိသင်အတွက်ရေသွင်းစနစ်သည်အပင်များအားရေကိုထိန်းသိမ်းရန်နှင့်ရေကိုထိန်းသိမ်းရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်အာဖရိကသို့မဟုတ်အခြားမိုးနည်းရေရှားဒေသများနှင့်ရေရှားပါးသောဒေသများတွင်ဖြစ်သည်။ယိုစိုက်ပျိုးခြင်းသည်ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်သစ်သီးများစိုက်ပျိုးရန်စိုက်ပျိုးရေးအတွက်အကြိုက်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အလွန်စျေးပေါ။ တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းကိုကမ္ဘာအနှံ့ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုကြသည်။
2.Product Parameter (အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်)
12, 16, 20, 22mm
10cm, 20cm, 30cm, 40cm, 50cm, 60cm
1.38L / H ကို, 2.0L / H ကို, 2.7L / H ကို
2000m / လိပ်, 1000m / လိပ်
၁) ။ ချောမွေ့သောဆောက်လုပ်ရေးမြင့်မားသောဖလပ်ဖိအားကိုခွင့်ပြုထားသည်
2) ။ ၎င်းသည်အသံနည်းသောပမာဏနှင့်တစ်ချိန်တည်းတွင်ရရှိနိုင်သည်
၃) ရေစုဆောင်းမှုသည်ရိုးရာဆည်မြောင်းနည်းလမ်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ၅၀% ရှိသည်
၂။ ဖန်စီစစ်ခြင်း၊ disc filter၊ centrifugal filter ကဲ့သို့သော filter များ
၃ / ၄ မှ€ ၂ မှ€သို့ ၃။
4. PVC ပိုက်နှင့် PE ပိုက်
6. PVC အဆို့ရှင်နှင့် PP connectors
ယိုဆည်မြောင်းစနစ်သည်ရိုးရှင်းသောဆည်မြောင်းစနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော်၎င်းတွင်အခြားပစ္စည်းကိရိယာများပါ ၀ င်သည်။ အချိုးအစားမြှင့်ဆေးထိုးသည့်ကိရိယာ;
PE ပိုက်သည်တပ်ဆင်ခြင်း၏အမြန်နှုန်း၊ သံချေးမ၊ ချုံ့ချဲ့မှု၊ အဆင်ပြေသောပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုစသည်တို့ရှိသည်။ ဒါဟာကျယ်ပြန့်ဆည်မြောင်းsystem.Ï† 16, Ï† 20, Ï† 25, Ï† 32, Ï† 40, Ï† 50, Ï† 63 အတွက်ဘုံသတ်မှတ်ချက်များမှာအသုံးပြုသည်။
Drop Arrow သည်ပျော့ပျောင်းသောယဉ်ကျေးမှု၊ ပျိုးခင်းစိုက်ပျိုးခြင်း၊ ၎င်းတို့ကိုအမျိုးမျိုးသောအမျိုးအစားခွဲခြားနိုင်သည် - ဖြောင့်သောမြား၊ ကွေးသောမြား၊ တစ်ခုတည်းသောမြှား၊ နှစ်မြှားနှင့်လေးမြှားစသည်။
ရေဖျန်းရေလောင်းခြင်းသည်ရေစုပ်စက်နှင့်ပိုက်လိုင်းစနစ် (သို့) သဘာဝရေအရင်းအမြစ်၏ကွဲပြားခြားနားမှုအားဖြင့်ရေကိုလေထဲဖိအားအချို့နှင့်ရေမှုန်ရေမွှားများသို့မဟုတ်အပင်များနှင့်မြေပေါ်သို့ဆင်းသက်ရန်အခိုးအငွေ့ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ရေဖျန်းရေလောင်းစနစ်သည်စပါးပင်များ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ သစ်သီးများ၊ စားသုံးနိုင်သောမှိုများ၊ နှစ် ဦး စလုံးလွင်ပြင်အဘို့, နှစ် ဦး စလုံးမြေဆီလွှာ၏ခိုင်ခံ့သောစိမ့်ဝင်မှုအဘို့, ဒါပေမယ့်လည်းအားနည်းမြေဆီလွှာ permeability များအတွက်တောင်ပေါ်မှာသက်ဆိုင်ပါသည်။ ကောက်ပဲသီးနှံများကိုဆည်မြောင်းဥယျာဉ်များ၊ ပန်းများ၊ မြက်ပင်များစိုက်ပျိုးနိုင်ရုံသာမကဓာတ်မြေသြဇာ၊ ပိုးသတ်ဆေး၊ နှင်းခဲ၊ အပူစွမ်းအင်၊
A: စက်ရုံသည် Qingzhou မြို့၊ Shandong၊ PR၊ China တွင်တည်ရှိသည်
A: ဖန်လုံအိမ်theရိယာဆိုတာဘာလဲ။ ဒေသခံမြေမျက်နှာသွင်ပြင်အခြေအနေနှင့်ရာသီဥတုအခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ ကော။
မေး။ ။ မင်းပို့တဲ့အချိန်ကဘယ်လောက်လဲ။
A: ငွေသွင်းပြီးနောက်ရက်ပေါင်း ၂၀ မှ ၃၀ ရက်အတွင်း။
hot Tags:: ကုန်ပစ္စည်းပေးသူ၊ ထုတ်လုပ်သူ၊ စက်ရုံ, လက်ကား၊ ၀ ယ်ခြင်း၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၊ အရည်အသွေး၊ စျေးနှုန်းနိမ့်၊ လျှော့စျေး၊